I-LG V20, i-smartphone yokuqala ene-Android Nougat 7.0, ngoku isemthethweni | Iindaba zeGajethi
I-LG V20, i-smartphone yokuqala ene-Android Nougat 7.0, ngoku isemthethweni
Kangangexesha elithile besisiva kwaye sifunda isixa esikhulu samarhe malunga ne LG V20, ethe ekugqibeleni yaziswa ngokusesikweni ngentsasa edlulileyo. Umlandeli we V10 Ifika igcina umgca woyilo oqalwe luguqulelo lokuqala kunye nokubonakala kwezikrini ezimbini apho abasebenzisi abaninzi baya kuba luncedo kakhulu kwiimeko ezahlukeneyo.
Ukongeza kwaye njengoko sonke besazi ukuba yiyo isixhobo sokuqala esiphathwayo ukuya kwintengiso nge-Android 7.0 Nougat efakwe ngokwendalo, ishiya ngaphandle i-Nexus enenkxaso kuGoogle kuphuhliso kunye nokwenziwa kwayo. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga neflegi entsha ye-LG, qhubeka ufunda eli nqaku kwaye ufumane zonke iinkcukacha, amanqaku kunye neenkcukacha.
1 Sala kakuhle kuyilo lweemodyuli ze-LG G5
2 Iimpawu ze-LG V20
3 I-Android 7.0 Nougat efakwe ngokwendalo
4 Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-LG V20
Sala kakuhle kuyilo lweemodyuli ze-LG G5
Xa i-LG yazisa ngokusesikweni i-LG G5 sonke sasicinga ukuba ukusukela ngoko inkampani yaseMzantsi Korea iya kukhetha uyilo lweemodyuli. Nangona kunjalo, impumelelo encinci ye-smartphone yakhe imkhokelele ekugcineni umgca wokuyila kule LG V20 esele bayisebenzisile kwinguqulelo yokuqala yesixhobo.
Ewe, Uyilo lweemodyuli lusekhona kakhulu kwezinye iinkalo kwaye kunokwenzeka ukutshintshiselana ngebhetri ngaphandle komzimba wealuminium kwaye kubonakala ngathi akukho mntu, usebenzisa enye yeenkqubo esizithandayo kakhulu kwi-LG G5. Oku kuyasivumela ukuba sibandakanye ikhadi le-MicroSD, into eluncedo ngokwenene ngaphandle kokugcinwa kwangaphakathi kwe-64 GB.
Ezona mpawu ziphambili kuyilo oluqhubekayo alithandabuzeki ukuba kukuphinda kabini isikrini kunye nekhamera ephindwe kabini esele siyibonile kwi-LG G5 kwaye ukuba iyazifezekisa iziphumo ezithembiswe yi-LG ngokungathandabuzekiyo siza kuba phambi kweyona khamera intle kwintengiso.
Iimpawu ze-LG V20
Uninzi lwe Iimpawu kunye nokubalulwa kwale LG V20 Babesele bevuza kwiintsuku ezingaphambi kwengcaciso-ntetho yabo, kodwa sisaza kuzijonga kwakhona;
Imilinganiselo; 159.7 x 78.1 x 7.6 mm
Iscreen esikhulu se-5,7-intshi ngesisombululo se-Quad HD ye-2.560 x 1.440 pixels
Umboniso wesibini we-intshi eyi-2,1 ngesisombululo seepikseli eziyi-160 x 1040
Iprosesa ye-Snapdragon 820 ukuya kuthi ga kwi-2.15 GHz isantya sewotshi
Iprosesa yemizobo yeAdreno 530
Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-64 GB kuyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera ephambili ene-16-megapixel sensor kunye ne-f / 1.8 aperture kunye nenye inzwa ye-8-megapixel ene-angle engile kunye ne-f / 2.4 ukuvula
Ikhamera engaphambili ye-8 megapixel
I-3.200 mAh yebhetri eya kuthi isinike ukuzimela okukhulu ngokwe-LG
Inkqubo yokusebenza ye-Android Nougat 7.0 ene-LG UX 5.0+ umaleko wokwenza ngokwezifiso
Akukho mathandabuzo ngokujonga amanqaku kunye nokubalulwa kwale LG V20 Sijongene nelungu elitsha lemakethi ekuthiwa liphezulu. Ukusuka kuyilo lwayo lwentsimbi, ngokusebenzisa ikhamera yayo emibini kunye nakwividiyo yayo eqinisekisiweyo zezinye zeenkampani ezibalaseleyo kwaye eziya kuthi zisonwabise ngamava angenakuthelekiswa nanto, zezinye zezona zinto zinomdla kule LG flagship intsha.
Ngokubhekisele kwikhamera ye-LG, ibonakalise kuphela imifanekiso embalwa ethathwe kunye ne-terminal ekubonisweni kwe-smartphone, kodwa ngenxa yezi zivamvo zimbini inyuka, i-16 kunye ne-8 megapixels, bambalwa abathandabuzayo umgangatho omkhulu esiza kuwunika imifanekiso ethathwe nge-LG V20. Ewe kunjalo, okwangoku kuya kufuneka silinde ukuze sikwazi ukuvavanya i-terminal kunye nekhamera yayo kwaye ngaloo ndlela siqinisekise izibonelelo eziza kusinika zona.
I-Android 7.0 Nougat efakwe ngokwendalo
Sele ziiveki ezimbalwa okoko uGoogle enike ngokusesikweni i-Android 7.0 Nougat entsha, kodwa okwangoku kwaye njengakwinguqulelo nganye entsha yenkqubo yokukhangela, ukwandiswa kuhamba kancinci. Esi sixhobo se-LG siye saba sisiphelo sokuqala kwimarike, ngaphandle kweNexus, efumana i-Android 7.0 Nougat kwaye ngendlela ekhethekileyo kuba ifakwe ngendlela yemveli ngaphakathi.
Ngokuqinisekileyo oku kuya kukunika amanqaku amaninzi xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo, abaqhubeka nokufikelela kwintengiso nge-Android 6.0 ngaphandle kokubheja kwi-Android entsha. Okwangoku, njengoko siza kukuxelela kamva, asinawo umhla osemthethweni wokufika kwe-LG V20 kwintengiso, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ukhetho lokuvavanya nokusebenzisa ingxelo entsha ye-Android mihla le iya kwenza ukuthengisa kukhula kakhulu.
Asikakwazi ukuvavanya i-LG V20, kodwa masithembe ukuba i-Android 7.0 Nougat entsha isebenza ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kokusinika iingxaki amaxesha amaninzi iinguqulelo ezintsha zesoftware evela kuyo nayiphi na ingxelo yomenzi.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-LG V20
Okwangoku i-LG isinike ulwazi oluncinci kakhulu malunga nexabiso kunye nokufumaneka kwale LG V20. Kwaye kunjalo inkampani yaseMzantsi Korea ayikhange ibe nesibindi sokuyibiza ngamaxabiso ngendlela kawonke-wonke, ubuncinci okomzuzwana, kwiflegi yayo entsha. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ucinge ukuba unikwe uyilo kunye neempawu zesi sixhobo ayizukuba yi-smartphone eyongayo ngokuchanekileyo.
Malunga nokufumaneka kule nyanga izakuthengiswa eMzantsi Korea, nangona singazi ukuba ingathengiswa nini eYurophu nakwamanye amazwe. Ndiyathemba ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo i-LG iyakusazisa ngamaxabiso ale LG V20 intsha kunye nomhla esinokufumana ngayo. Ngokwamahemuhemu, inokuqhubeka ukuthengiswa kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuba ibonakalisile kwimarike yaseKorea, nangona besesitshilo kuwe okwangoku ukuba akukho umhla osemthethweni wenkulumbuso kwintengiso.
Ucinga ntoni ngale LG V20 intsha esiyaziyo ngokusemthethweni namhlanje?. Sitshele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngenye yeendlela zonxibelelwano apho sikhona kwaye apho sifuna ukuxoxa ngale nto kunye nezinye izihloko ezininzi nawe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG V20, i-smartphone yokuqala ene-Android Nougat 7.0, ngoku isemthethweni
Enye i-Galaxy Note 7 iyaqhuma kwaye yonakalise ihotele exabisa i-1380 yeedola
URazer Ornata, ikhibhodi yokuqala ye-mecha-membrane kwintengiso